३ जेठ, रामेछाप । रामेछाप नगरपालिकाको नगरप्रमुख र उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ । रामेछाप नगरपालिकाको नगरप्रमुखमा कांग्रेसबाट लवश्री न्यौपाने विजयी भएका छन् । त्यसैगरी नगरउपप्रमुखमा बाला कुमारी कार्की विजयी भएकी छिन् । न्यौपानले एमालेका उम्मेदवार रोशन पाख्रिनलाई पराजित गरेर विजयी भए भने कार्कीलेएमालेकी
३ जेठ, रामेछाप । नेकपा एकीकृत समाजवादीले रामेछापको मन्थली नगरपालिकाको वडाअध्यक्ष जितेर खाता खालेको छ । जिल्लाको ६४ वटा वडा मध्ये एर्कीकृत समाजवादीले मन्थली नगरपालिका–५ सुनारपाानीको वडाअध्यक्षमा जित हासिल गरेको हो । सुनारपानीमा एमालेका उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै गणेश कार्की वडाअध्यक्षमा विजयी भएका हुन् । उनले
२ जेठ, रामेछाप । रामेछाप जिल्लामा २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचन भन्दा सात प्रतिशत कम मत खसेको छ । गत निर्वाचनमा रामेछापमा ७२ प्रतिशत मत
रामेछापमा २० वटा वडाको नतिजा सार्वजनिक, कहाँ कसको जित ?...
२ जेठ, रामेछाप । रामेछापमा स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत वडा अध्यक्षका उम्मेदवाहरुको धमाधम परिणाम सार्वजनिक भइरहेको छ । पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार जिल्लाको ६४ मध्ये २०
एउटै इन्फोग्राफमा हेर्नुहोस् रामेछापमा स्थानीय तह निर्वाचनको सम्पूर्ण तथ्यांक
२८ वैशाख, काठमाडौं । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रामेछापले रामेछाप जिल्लाभित्र चुनावको सम्पूर्ण तयारी भएको बताएको छ । जिल्लाको आठ वटा स्थानीय तह र ६४
रामेछापमा एकीकृत समाजवादीले खाता खोल्यो, मन्थली नगरपालिका–५ को
रामेछाप नगरपालिकामा कांग्रेसले जित्यो, नगरप्रमुख न्यौपाने र नगर
खाँडादेवी गाउँपालिकामा एमालेले खाता खोल्यो, वडा नम्बर ९
३ जेठ, रामेछाप । नेकपा एकीकृत समाजवादीले रामेछापको मन्थली नगरपालिकाको वडाअध्यक्ष जितेर खाता खालेको छ । जिल्लाको ६४ वटा वडा मध्ये एर्कीकृत समाजवादीले मन्थली नगरपालिका–५ सुनारपाानीको वडाअध्यक्षमा जित हासिल गरेको हो । सुनारपानीमा एमालेका उम्मेदवारलाई
३ जेठ, रामेछाप । रामेछाप नगरपालिकाको नगरप्रमुख र उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ । रामेछाप नगरपालिकाको नगरप्रमुखमा कांग्रेसबाट लवश्री न्यौपाने विजयी भएका छन् । त्यसैगरी नगरउपप्रमुखमा बाला कुमारी कार्की विजयी भएकी छिन् । न्यौपानले
३ जेठ, रामेछाप । रामेछापको लिखु तामाकोसी गाउँपालिका–६ खिम्तीमा एमालेका शिव न्यौपाने वडाअध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । न्यौपाने गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।
अस्पताललाई उत्कृष्ट बनाए, अब रामेछाप नगरपालिकालाई नमूना बनाउन चाहन्छुः पाख्रिन
सुनापति गाउँपालिकालाई भ्रष्टचारमुक्त गाउँपालिका बनाएर देखाउछुः खड्का
जीवनकाे पाठशालामा सिकेकाे व्याकरण
साहित्यकार श्रेष्ठको उपन्यास ‘आभास’ सार्वजनिक
चौमासिक साहित्यिक पत्रिकाको विमोचन
नयाँ बर्ष मनाउन शैलुङमा पर्यटकको भीड (फोटोफिचर)
रामेछापको उच्च क्षेत्रमा भारी हिमपात
शैलुङमा हिउ परेसँगै हिउ खेल्ने
माथि माथि शैलुङ्गेमा चौरी डुलाउनेलाई
रामेछाप–मन्थली सडक खण्डको भँगेरीमा आएको
दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिकामा आलु धेरै
ल्याङल्याङ शब्द नेपालभरि मात्र होइन, नेपाली भाषी जहाँजहाँ छन्, त्यहाँ बोलिन्छ । ल्याङल्याङ शब्दको उत्पत्ति रामेछापमा भएको हो । रामेछापको
२८ वषिर्य दिपा पुन (नाम परिवर्तन) जसलाई आफ्नो नाक बाङ्गो छ भन्ने कुराले औडाह भएको रहेछ । सानो छँदा लडेर
डा‍. दिनेश पौडेल
रामेछाप र ओखढुङ्गा जिल्लाको बीचमा पर्ने लिखु खोलामा निर्माणाधिन् झन्डै ६० मेघावाट क्षमताको लिखु –४ जलबिद्युत आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेर
एक दुई दिनयताको खबरहरुको हेडलाइन र सामाजिक सञ्चालका पोष्टहरु हेरेर एक स्वास्थ्यकर्मी र यस जिल्लाको स्वास्थ्य संस्थाहरुको सेवाग्राही समेत भएको
डा. नरेन्द्र गिरी
पृष्ठभूमीः स्वस्थ भई बाँच्न पाउनु प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक हो । यसै संबिधान प्रदत्त हकको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले प्रत्येक
विश्वब्यापी रुपमा फैलिरहेको कोरोनाको कहरबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन् । विगत सात महिनादेखि हामी कोरोना महामारीकाे विरद्ध जुधिरहेका
अबको नौ दिन अर्थात भदौ २९ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको चार बर्षे कार्यकाल सकिदैछ । घिसिङको